Iipatches zasimahla, iGum kunye neLozenges-802Quits
Ikhaya » Iivenkile » NDIFUNA UKUYEKA » Fumana Uncedo Lokuyeka » Iipatches zasimahla, iGum kunye neLozenges
IIMPAWU ZASIMAHLA, IINTSHUMI NOKUQINISEKISA
Yonke imizamo yokuyeka ithuba lokuba ufumane oko kukusebenzela kakuhle. Nokuba uyekile ngokwakho okanye usebenza noQuit Coach, usebenzisa iyeza lokuyeka, ekwabizwa ngokuba yi-nicotine replacement therapy (NRT), yonyusa amathuba akho okuyeka ngempumelelo. Ngapha koko, amathuba akho okuyeka aye anda xa:
Hlanganisa ukuyeka amayeza kunye nokuzikhethela ukuyeka ukuqeqesha uncedo kwi Vermont Yeka Iqabane or Yeka Uncedo ngeFowuni
Hlanganisa unyango olwenziwa endaweni ye-nicotine ngokusebenzisa Iifom ze-2 zokuyeka amayeza ngaxeshanye. Ukudibanisa ukusebenza ixesha elide (i-patch) kunye nokusebenza ngokukhawuleza (i-gum okanye i-lozenge) unyango lokutshintshwa kwe-nicotine kukhuthazwa kumathuba amakhulu okuyeka. Funda malunga Ukudibanisa ukuyeka amayeza apha ngezantsi.
Ukuba awuphumelelanga ngendlela enye kwixa elidlulileyo, unokuqhuba kakuhle ngokuzama enye.
Ndwendwela i-portal ekwi-802Quit kwi-intanethi uku-odola ii-nicotine patches, i-gum kunye ne-lozenges>
Funda ngakumbi malunga nonyango lokutshintsha intsholongwane uyeke amayeza kunye nezinye iindlela zokuzifumana>
Ulwazi ngeeNicotine Patches zasimahla, iGum kunye neLozenges kunye namanye amayeza okuyeka
Olona sapho luqhelekileyo lusetyenziswayo ukuyeka amayeza lonyango lwe-nicotine, njengamachaphaza amnyama, i-gum kunye ne-lozenges. I-802Quits ibonelela ngezi SIMAHLA kubantu abazama ukuyeka icuba kwaye bazise ngqo ekhayeni lakho. Amayeza okuyeka simahla afika kwiintsuku ezili-10 zoku-odola. Unokufumana ii-patches zasimahla ze-nicotine ngaphambi komhla wokuyeka kwakho ukuba nje unomhla wokuyeka kwiintsuku ezingama-30 ngaphambi kokuba ubhalisele ukufumana iinkonzo.
Ukongeza eku-odoleni ii-nicotine patches, i-gum kunye ne-lozenges MAHALA kwii-802Quits, umboneleli wakho wezempilo unokuyalela ezinye iintlobo zokuyeka amayeza. Xa amayeza esetyenziswa kunye, anokukunceda uyeke kwaye ugcine impumelelo. Thetha nomboneleli wakho.
Iindidi zokuyeka amayeza
Ukuba uzame enye indlela ngaphambili kwaye ayisebenzi, cinga ukuzama enye ukukunceda uyeke ukutshaya okanye elinye icuba.
Unokuba nemibuzo malunga nokuyeka amayeza. Ulwazi olukule candelo luyakunceda uqonde iimveliso ezinokukunceda uyeke icuba, i-e-cigarettes okanye ezinye iimveliso zecuba.
I-Nicotine Replacement Therapy iyeke amayeza
Beka eluswini. Ilungele ukukhululeka okungapheliyo. Ngokuthe ngcembe ikhupha inikotini egazini lakho. Igama lophawu oluqhelekileyo yi-Nicoderm® patch.
Hlafuna ukukhupha inicotine. Indlela eluncedo yokunciphisa iminqweno. Ikuvumela ukuba ulawule idosi yakho. Igama eliqhelekileyo le-brand yiNicorette® gum.
Ibekwe emlonyeni njengeelekese ezilukhuni. Iicicotine lozenges zibonelela ngezibonelelo ezifanayo zentshungama ngaphandle kokuhlafuna.
Ukuba ufuna ukuyeka ngamachaphaza e-nicotine kunye ne-gum okanye i-lozenges, kukho iindlela ezi-3 zokuba ungazifumana njani, ufumana malini kwaye kubiza malini:
1.Bhalisa nge-802Quits kwaye ufumane phakathi kweeveki ezi-2 ukuya kwezisi-8 zee-nicotine patches, PLUS gum okanye i-lozenges. Funda nzulu.
2.Ukuba unayo iMedicaid kunye nephepha likagqirha, unokufumana iimveliso ezikhethiweyo ezingenamda zeepototiki kunye nentsini okanye i-lozenges okanye ukuya kuthi ga kwiiveki ezili-16 zeempawu ezingakhethwanga ngaphandle kwendleko kuwe. Buza ugqirha wakho ngeenkcukacha.
3.Ukuba unayo enye i-inshurensi yezonyango unokufikelela kwi-NRT yasimahla okanye enesaphulelo ngomyalelo. Buza ugqirha wakho ngeenkcukacha.
Amayeza okuyeka amayeza kuphela
ICartridge iqhotyoshelwe emlonyeni. Ukungenisa umoya kukhupha isixa esithile senicotine.
Ngaba kunokuba luncedo ekunciphiseni inkanuko kunye neempawu zokurhoxa, ezinje ngoxinzelelo kunye nokucaphuka. Ingasetyenziselwa ngokudibanisa neemveliso zonyango lwe-nicotine ezinje ngeepatches, i-gum kunye ne-lozenges.
Impompo yebhotile equlethe inikotini. Ngokufana ne-inhaler, isitshizi sikhupha inani elithile lenicotine.
Chantix ukuhambelana namazwi® (VARENICLINE)
Nciphisa ubukhali benkanuko kunye neempawu zokurhoxa-ayiqulathanga inicotine. Isifundo sokuziva sonwabile kwicuba. Akufanele idibaniswe namanye amayeza. Ukuba unamayeza oxinzelelo kunye / okanye unxunguphalo, nxibelelana nogqirha wakho.
Izinto ezingentla zifumaneka ngugqirha kuphela. Jonga ikhemesti yakho ngolwazi lweendleko. I-Medicaid igubungela ukuya kwiiveki ezingama-24 zeZyban® kunye neCantix®.
Kunokubakho iziphumo ebezingalindelekanga zokuyeka amayeza. Iziphumo ziya kwahluka kuye ngomntu. Nangona kunjalo, bambalwa kakhulu abantu (abangaphantsi kwe-5%) ekufuneka bayeke ukusebenzisa amayeza ngenxa yeziphumo ebezingalindelekanga.
Ukudibanisa ukuyeka amayeza
Ngaba uyazibuza ukuba amayeza anokukunceda njani uyeke ukutshaya, ukuphapha okanye elinye icuba? Ngaba ucinga nge-nicotine patch vs lozenges vs. gum? Xa kuthelekiswa nokuhamba kobandayo, ukusebenzisa iipatches, i-gum kunye ne-lozenges kunokuwonyusa kakhulu amathuba akho okuyeka ngempumelelo icuba. Kodwa ungawonyusa amathuba akho nangakumbi ngokudibanisa unyango lwe-nicotine, njengepatch esebenza ixesha elide kunye nentsini okanye ii-lozenges, ezisebenza ngokukhawuleza. Oku kuthetha ukuba ungasebenzisa i-nicotine gum kunye namachaphaza kunye, okanye ungasebenzisa i-nicotine lozenges kunye neepatch kunye.
Ngoba? Isiziba sihambisa umjelo ongaguquguqukiyo wenicotine iiyure ezingama-24, ke ufumana ukusebenza ixesha elide, ukukhululeka okungaguqukiyo kwiimpawu zokurhoxa, ezinjengeentloko kunye nokucaphuka. Okwangoku, i-gum okanye i-lozenge ihambisa isixa esincinci se-nicotine kwimizuzu eli-15, ekunceda ukuba ulawule iimeko ezinzima kwaye ugcine umlomo wakho uxakekile njengoko uphuma kwiminqweno.
Isetyenzisiwe kunye, isiziba kunye nentsini okanye ilogwe zinokubonelela ngesiqabu esingcono kwiminqweno ye-nicotine kunokuba zinokusetyenziswa zodwa.
Kusenokwenzeka ukuba uya kuba neempawu zokurhoxa kwakamsinya emva kokuba uyekile icuba. Ezi mpawu zomelele kakhulu kwiiveki ezimbini zokuqala emva kokuba uyekile kwaye kufuneka uhambe kungekudala. Iimpawu zokurhoxa zahlukile kuye wonke umntu. Ezinye zezona ziqhelekileyo zibandakanya:
Ndiziva ndonwabile okanye ndibuhlungu
Uziva ucaphukile, uyarhabaxa okanye unqenqemeni
Ingxaki yokucinga ngokucacileyo okanye ukugxila
Ndiziva ndingonwabanga kwaye ndixhumaxhuma
Ukwanda kwendlala okanye ukutyeba
Ngaba ufuna uncedo lokuyeka?
I-802Quits ibonelela ngeendlela ezintathu zokukunceda uyeke ukutshaya simahla: Ngefowuni, kuBuntu nakwi-Intanethi.
Uncedo lokuShiya ukuSimahla